Akhriso;War Murtiyeedka ururada Haweenka IIDA, SWA, FEFA, BADEF iyo Haweenka gobolka Banaadir - Jowhar Somali news Leader
Home News Akhriso;War Murtiyeedka ururada Haweenka IIDA, SWA, FEFA, BADEF iyo Haweenka gobolka Banaadir
Akhriso;War Murtiyeedka ururada Haweenka IIDA, SWA, FEFA, BADEF iyo Haweenka gobolka Banaadir
Kulan ay maanta isugu yimaadeen Ururada Haweenka IIDA,SWA,FEFA ,BADEF iyo Haweenka gobolka Banaadir ayaa si wadajir ah waxa ay u soo saareen War Murtiyeed.
Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay qaar ka mid ah Bulshada Rayidka iyo haweenka Soomaaliyeed oo ka kala socda dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Halkan hoose ka aqriso War Murtiyeedka oo dhan;
” Codsiinta Rabitaanka Dadka”
Dhaqdhaqaaqa Heshiiska Bulsho ee Soomaaliyeed iyo Bulshada Rayidka ee isku Ra’yiga ah waxay weydiisanayaan “Isla-Xisaabtan Weyn ee ku wajahan Siyaasadda iyo Maamul Wanaag si loo ilaaliyo guulihii laga gaaray Xuquuqda Aadanaha iyo awood siinta haweenka ”
8-Maarso 2020 Muqdisho- Soomaaliya
Ka hor tallaabo kasta ee kale waxaan jeclaan lahayn inaan daqiiqad aamusnaan ah aan weydiisanno qof kasta oo arkaa War Saxaafadeedkan, inuu u duceeyo saaxiibkeen Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil kaasoo sidaad ogtihiinse, naga tagey sanadkii hore Maarso 8, 2019. Xoosh (Allaha u naxariistee) wuxuu saaxiib la ahaa bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed, Xoosh wuxuu ahaa halyeey run ah iyo difaace adag ee xuquuqda aadanaha oo si dhab ah uga go’neyd ka dhigista Soomaaliya mid wanaagsan.
Isaga iyo bulshada ra’yidka waxay kaalin weyn ka qaateen dejinta Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka Federaalka (IFCC) oo loo xilsaaray mas’uuliyadda qoritaanka Dastuurka Federaalka. Marxuun Xoosh wuxuu sidoo kale nala joogay nagana caawiney in qoondada haweenka la gaarsiiyo 20% markii uu socday shirkii nabadeed ee Garoowe II, Galkacyo.
Wuxuu gacan naga siiyey qoritaanka Sharciga Guddiga Xuquuqda Aadanaha .
Sidaan isaga u xasuusanno, waxaan ballan qaadaynaa inaan si adag u xaqiijino himilooyinka uu u taagan yahay. Waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo akhrinaya war saxaafadeedkan inuu Ilaahey u baryo.
Saaxiibkeen qaaliga ah waan ku tabi doonnaa. Illaahay ha kuu Naxariisto- AAMIIN
Munaasabadda weyn ee lagu xusaayo Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka oo loo qorsheeyay 8-da Maarso 2020 magaalada Muqdishu,
1-Dhaqdhaqaaqa Heshiiska Bulsho ee Soomaaliyeed oo ay wehliso Bulshada rayidka ee isku ra’yiga ah (oo ka kooban Ururka Horumarinta Haweenka ee IIDA , Dhaqdhaqaqa Aaya ka talinta Haweenka Soomaaliyeed (SWA), Haweenka Gobolka Banaadir , Waxbarasho Bilaash ah oo Loogu Talagalay Dadweynaha (FEFA), iyo Banadir Development Foundation (BADEF) iyo kuwa kale ayaa maanta iskugu yimid halkan, iyagoo matalaya qaar ka mid ah Bulshada Rayidka iyo haweenka Soomaaliyeed oo ka kala socda dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo soo saaro bayaankan soo socda:
Horumar la taaban karo ee dhismaha dowladeed.
Waxaan qaddarineeynaa guulaha waaweyn iyo horumarka dhiirigelinta leh ee qaran ahaan lagu xaqiijiyay sanadihii la soo dhaafay. Runtii, safarka loo maray nabad-dhisidda iyo dhisidda-dawladdu wuxuu ahaa mid cajiib ah, inkastoo ay jiraan caqabado badan oo wali jira. Waxaan ammaaneeynaa dhammaan hawl wadeenada ka qeyb qaatay howshan.
Sharciga cusub ee doorashada ay ansaxiyeen labada aqal ee Baarlamaanka uuna saxiixay Madaxweyne Maxamed C / llaahi Formaajo waa tallaabo muhiim ah, hase yeeshee sharcigaan kama jawabaayo su’aalo badan oo lagama maarmaan u ah hirgelintiisa. Arrimaha ku saabsan qoonda loogu suurta gelin karo Soomaalida ka kala yimid daafaha dalka inay ka qeybqaataan lama xallin.
Waxaan ugu baaqeeynaa baarlamaanka federaalka, guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka (NIEC) iyo dowladda dhexe, Dowladaha xubinta ka ah federaalka in ay si dhaqsi ah u xalliyaan arrimahan. Waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geeysanno hirgalintooda.
2. Aqoonsiga guulaha laga gaaray xoojinta haweenka
Waxaan ka mahadcelineeynaa guulaha waaweyn iyo kuwa yar yar oo ilaa iyo hadda la gaaray ee lagu horumarinayo sinnaanta lammaanaha iyo ilaalinta xuquuqda haweenka ee Soomaaliya. Faa’iidooyinkaasi waa: (a) Waxbarashada gabdhaha; (b) natiijooyinka Caafimaad ee ku wanaagsan haweenka; (c) xagga nabadgelyada iyo ilaalinta gabdhaha iyo haweenka; (d) kobcinta kaqeybgalka haweenka ee howlaha siyaasadeed; iyo, (e) Isweeydaarsiga jinsiga ee qaybaha bulshada iyo kuwa gaar ahaaneedba, ayaa si adag loogu guulaystay deegaannada ay ka jiraan caqabado iyo khatarro. Waxaan ugu yeereeynaa dhammaan hawl wadeennada inay waxbadan qabtaan si loo ilaaliyo guulahaan.
3.Isku-darka guulaha la gaaray
Markaan ka fikirnay dhacdooyinka muhiimka ah iyo guulihii la gaarey sanadki la soo dhaafay, waxaan ku faaneeynaa xaqiiqda ah in 2019 ay calaamad u tahay isbedel muhiim ah oo ku saabsan ajendaha aasaaska awood siinta haweenka. Axdiga Haweenka Soomaaliyeed, oo la ansixiyay Maarso 2019 wuxuu hadda na siiyay agab iyo qalabyo dheeraad ah oo lagu riixayo in lagu daro ka-qaybgalka haweenka guud ahaan siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada ee Soomaaliya.
Bulshada Rayidka ee hoos imaanaya Dhaqdhaqaaqa Heshiiska Bulsho ee Soomaaliyeed waxay sii wadi doonaan inay la shaqeeyaan Soomaalida ay isku fikirka yihiin si loo sugo xuquuqda haweenka Soomaaliyeed, looguna dhiirrigeliyo awood siinta haweenka iyo inay gacan ka geeystaan sidii loo xoojin lahaa guulahaas iyada oo loo marayo geeddi socodka dastuurka.
4. Wax badan samee si aad u ilaaliso una difaacdo xuquuqda aadanaha iyo haweenka
Sharciyo iyo siyaasado cusub ayaa la soo saaray si loo adkeeyo qaab dhismeedka iyo shaqooyinka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Isla mar ahaantaana, waddanku wuxuu ansaxiyay heshiisyo caalamiga ah ee muhiimka ah sida kan Xuquuqda Caruurta (CRC) ee la ansixiyay 2015, Heshiiska Xuquuqda Naafada (CRPD) ayaa la ansaxiyay 6dii Agoosto 2019 iyo Siyaasadda Badbaadada Bulshada ee Soomaaliya Agoosto 2019.
Kuwani waa dadaallo lagu ammaano Dowladda Federaalka oo u adeegi doona si ilaalinta dadka ugu nugul Soomaaliya oo ay ku jiraan carruurta, gabdhaha, waayeelka iyo dadka naafada ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka walaacsanahay in biilasha kale ee horusocodka ah ay wajahayaan mucaarad iyo carqalad ka imaanaya hoggaanka siyaasadeed ee dalka.
Hindise Sharciyeedka Dambiyada Jinsiga(SOB), tusaale ahaan, waxaa hortaagan caqabado, weerarro, olole dacaayad iyo cabsi-gelin meelo gaar ah ka imaanaya. Go’aanka midaysan iyo midka aan sharciga ahayn ee Guddoomiyaha Barlamaanka ee dib ugu celinta Hindise Sharciyeedkaan ee Golaha Fulinta (Golaha Wasiirrada) wuxuu u taagan yahay kiis si cad , iyo qorsho muuqda oo ka imaanaayo Golaha BarlamaankaFederaalka.
5-Waa in la joojiyaa tixgelin la’aanta xeerarka iyo nidaamka dowliga ah
Waxaan ka walaacsanahay aaladaha noocan oo kale ah ee loo abuurayo sidii hoos loogu dhigi lahaa Xuquuqda Aadanaha iyo gaar ahaan awood-siinta haweenka, in la wiiqo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee dadka nugul iyo kuwa la heeybsooco ee Soomaaliya.Waxaan ugu baaqeeynaa hoggaamiyaasha dalka in ay tusaale wanaagsan u noqdaan bulshada inteeda kale iyadoo la joojinayo ciqaab la’aanta iyo ixtiraam la’aanta xeerarka iyo nidaamka si loo dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan hey’adahooda dowliga ah
6-Diirad saaridda isla xisaabtanka
Waxaan aaminsannahay inaan u baahan nahay inaan dhisno oo aan kobcinno dhaqan ah isla xisaabtan siyaasadeed iyo dowladnimo si aan u helno bulsho deggan oo wada-noolaansho leh. Waa inaan culays iska sarnaa dhammaanteen labada dhinac – dawladda iyo kuwa aan dowliga ahaynba (CSOs) in aan diiradda saarno isla xisaabtanka, in aan ka wada shaqeyno danaha ugu wanaagsan bulshada Soomaaliyeed , si aan mas’uul uga noqonno ficilkeenna.
Waxaan culays ku saareynaa hoggaamiyaasha siyaasadda, annagoo ka bilaabayna Madaxweeynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre , in ay la tacaalaan , go’aan cad ka qaataan isla markaasna xalliyaan arrimaha muhiimka ah ay ka mid yihiin nabadda, amniga iyo difaaca xuquuqda Aadanaha , gaar ahaan dadka nugul ee ay ku jiraan dumarka iyo carruurta. Waxaan culays ku saareynaa guddoomiyaha baarlamaanka inuu ixtiraamo qawaaniinta iyo nidaamka Aqalka. Waxaan haweenka sharci dajinta ah culeys uga dhigeeynnaa inay wax badan ka qabtaan isla markaana diyaar u ahaadaan in lagula xisaabtamo falalka iyo wax qabadkooda baarlamaanka. Waxaan culays ku saareynaa dhalinyarada inay ka hadlaan oo ay kaqeybqaataan dhismaha dowladda.
Annaga oo ah Dhaqdhaqaaqa Heshiiska Bulsho ee Soomaaliyeed oo ay weheliso Bulshada rayidka ee isku ra’yiga ah, waxaan sii wadi doonnaa la xisaabtanka iyo ku dhaqanka sharciga.
Waxaan sii wadi doonaa dadaalkeena horumarkiisa iyo Dalabkeena oo illaa iyo hadda ka yimid 35000 oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka codsanaya Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda inay abaabulaan taageero siyaasadeed si loo hubiyo in loo gudbiyo baarlamaanka sharciyada bulshada quseeya ay ugu horeeyaan Hindise Sharciyeedka Dambiyada Jinsiga(SOB), kan Caruurta iyo dhameystirka Dastuurka .
Maanta wadanku wuxuu ku dhow yahay inuu ka baxay waqtigii mugdiga ahaa ; Golaha Wasiirrada ayaa soo saaray sharciyo iyo qawaaniin aad muhiim u ah sida sharciga Naafada, iyo siyaasadda ilaalinta bulshada; dawladdaadu waxay soo saartay aqoonsi biometriik ah dhammaan askarta; waxaa hubaal ah mira dhalka dadaalka aad u gashay wada shaqeeyta aad la shaqeeysay bulshada caalamka oo manta keenay deen Cafis iyo kaalmo horumareed oo dalka loo fidinaayo.
Waddanku wuxuu ku socdaa u guurista Mustaqbal horumareed oo ku dhisan sharci, Dimuqraadiyadda, Daah furnaanta iyo isla xisaabtan. Waxa kaliya oo dhimman oo aan madaxda ku boorineeynaa in ay dadaalkooda ku daraan arrimaha bulshada taabanaayo.
7. Hoggaan Geesinimmo iyo aragti fog ayaa loo baahan yahay si loo joogteeyo isla xisaabtanka
Si waddankeenu hore ugu socdo, waa inaan isku xirnaano oo aan si joogto ah wax u wada qabanno.
Hoggaanka siyaasadeed iyo kuwa aan dowliga ahayn labaduba waa inay isweeydaarsadaan xisaabtanka si loo xoojiyo xukunka sharciga, loo horumariyo nabadda iyo dib-u-heshiisiinta, loona suurtagaliyo muwaadiniinta inay gartaan xuquuqdooda aasaasiga ah. Annaga oo ah jilaayaasha aan dowliga ahayn, waxaan biloownay hab-raacis joogto ah oo xoojin doona isla xisaabtanka. Howshani waxay ku lug lahaaneysaa soo saarista Baaq-xilliyeedyo iyo warbixinno muujinaya waxqabadka hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo geeddi socodka siyaasadeed ee isla-xisaabtanka wanaagsan. Isla cabbirkaas, waxaan weydiisan doonnaa jawaab celin ka timmaadda Dowladda Federaalka sida ugu fiican ee aan uga shaqeyn karno wanaagga weyn ee Soomaaliya.